Madaxweynaha Maraykanka oo la kulmaya dhigiisa Afghanistan | Star FM
Home Caalamka Madaxweynaha Maraykanka oo la kulmaya dhigiisa Afghanistan
Madaxweynaha Maraykanka oo la kulmaya dhigiisa Afghanistan
Madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu Jimcada shir la qaato dhigiisa wadanka Afghanistan Ashraf Ghani.
Kulanka ayaa ka dhici doono aqalka cad ee xukuumadda Washington looga arrimiyo.
Waxaa kulanka sidoo kale ka qayb geli doono guddoomiyaha golaha sare ee Afghanistan u qaabilsan dib u heshiisiinta Cabdullah Cabdullah.
Waxaa shirka diiradda lagu saari doonaa tallaabada uu Maraykanka ciidamadiisa kaga saaraya Afghanistan iyo dagaallada u dhexeya ciidamada ammaanka ee Afghanistan iyo kooxda ka soo horjeeda ee Taalibaan oo sare u kacay.
Previous articleDHAGEYSO:Safiirka Itoobiya ee Soomaaliya iyo madaxweynaha Puntland oo kulmay
Next articleItoobiya oo isku diyaarinayso doorasho